Izindaba - Amacala e-US COVID-19 adlula ama-25 mln - iJohns Hopkins University
U-Allyson Black, ongumhlengikazi obhalisiwe, unakekela iziguli ze-COVID-19 e-ICU yesikhashana (i-Intensive Care Unit) e-Harbour-UCLA Medical Centre eTorrance, eCalifornia, e-US, ngoJan 21, 2021. [Izithombe / Ama-ejensi]
ENEW YORK - Inani eliphelele lamacala e-COVID-19 e-United States afinyelele ku-25 million ngeSonto, ngokusho kweCentre for Systems Science and Engineering eJohns Hopkins University.
Izibalo zamacala e-US COVID-19 zikhuphuke zaya ku-25,003,695, nokufa kwabantu abayi-417,538, kusukela ngo-10: 22 ekuseni isikhathi sendawo (1522 GMT), ngokusho kwesibalo se-CSSE.
ICalifornia ibike inani elikhulu lamacala ezifundazweni, limi ku-3,147,735. ITexas iqinisekise amacala angu-2,243,009, alandelwa yiFlorida ngamacala angu-1,639,914, iNew York enamacala angu-1,323,312, ne-Illinois ngamacala angaphezu kwesigidi esisodwa.
Ezinye izifundazwe ezinamacala angaphezu kuka-600,000 zibandakanya iGeorgia, i-Ohio, iPennsylvania, i-Arizona, iNorth Carolina, iTennessee, iNew Jersey ne-Indiana, idatha ye-CSSE ikhombisile.
I-United States isalokhu iyizwe elihlaselwe kakhulu yilesi sifo, esinamacala amaningi nokufa kwabantu emhlabeni, okwenza amaphesenti angaphezu kwama-25 amacala omhlaba omubi kanye namaphesenti acishe abe ngu-20 okufa kwabantu emhlabeni jikelele.
Amacala e-US COVID-19 afinyelela kwizigidi eziyi-10 ngoNovemba 9, 2020, futhi isibalo saphindeka kabili ngoJan 1, 2021. Kusukela ekuqaleni kuka-2021, amacala aseMelika akhuphuke ngezigidi ezi-5 ngezinsuku ezingama-23 kuphela.
I-US Centers for Disease Control and Prevention ibike amacala ayi-195 adalwe ukuhluka okuvela ezifundeni ezingaphezu kuka-20 kusukela ngoLwesihlanu. I-ejensi ixwayise ukuthi amacala akhonjisiwe awamele inani eliphelele lamacala ahlobene nokuhlukahluka okungenzeka kusakazwa e-United States.
Isibikezelo somhlangano kazwelonke esibuyekezwe ngoLwesithathu yi-CDC sibikezele inani lokufa kwabantu abangama-465,000 kuya kwabangu-508,000 e-United States ngoFebhuwari 13.